iinkonzo – 360 OpenPlotter
Kunye drones zethu abhaliswe ngokusemthethweni sinako ukwenza iimbono elingu-project eyakho, umcimbi okanye ukufakwa. Nokuba oko umtshato eyakho, iphenyane okanye isakhiwo, nokuba landscapes libonakale.
abafoti bethu iifoto nokusombulula ubuncinane 4k kunye immersive ngokupheleleyo 360. Bayacelwa bonke abaphumeleleyo ngomsebenzi wabo bhanya ngamazwe kunye liphikisa nokufota. zethu 360 Abafoti kuba wathembela Google kwaye banamalungelo awodwa kunye ukufikelela kwiindawo efihliweyo lemizi yabo ekhaya okhethiweyo. Phantsi kweemeko eziqhelekileyo imifanekiso le ukulayisha uthathe indawo yokuqala in Google. Photographer nganye izimvo ngaphezu kwesigidi. ishishini eyakho kungathatha indawo yokuqala Maps Google silinganiswa iindlela zethu eqinisekisiwe kwaye imifanekiso.
Rights Flight Legal & amaphepha
noorhulumente kunye namagunya asekuhlaleni unako ukutshabalalisa zonke izicwangciso zemveliso okwakho. Special ukuba sithethe ngayo moya neefoto zasemoyeni. In this example you see our Certificate of Identification of one of our registered drones in Romania. Siye lendawo basebenzi zisekelwe. Eli phepha likuvumela ukuba awasuse njenge moya kunye ngeenyawo ngathi moya. Ngasinye ndiyisuse into esemthethweni ababhalisiweyo wafumana imvume. Eli phepha akavumi ukwenza ifilimu okanye iifoto. Kuba oku zikhona imithetho ezahlukeneyo kunye namasebe karhulumente.
namanje ukuba zidibane. Izohlwayo ungakwazi ikufune 20000 Euro entolongweni. Sihlela kuwe eYurophu i flightrights namaphepha asemthethweni. Kwakhona kuyenzeka ukuba wena kunye nomsebenzisi wakho kuluhlu lwethu, ukuba uyakwazi ukubhabha ikude yethu yezomthetho. Le modeli isoloko isetyenziswa ngemise- TV kumatyala yongxamiseko okanye abakhenkethi ukuba uthanda ukuvelisa imifanekiso zezomthetho. Buza nathi ekuqaleni frontto ukuxoxa yindlela engcono kuwe.